सामाजिक Archives - Page 13 of 38 - khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
अबदेखि घरमै बसेर यसरी गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई दर्ता
Posted On February 13, 2018 Author siteadmin Category सामाजिक.
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको अनलाइन आईएमईआई दर्ता प्रणााली शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि अनलाइनमार्फत आईएमईआई/ईएसएन/एमईआईडी दर्ता प्रणाली लागु गरेको हो । मोबाइल सेट तथा डिभाइसको पहिचान नम्बर यसअघि प्राधिकरणले म्यानुअल प्रणालीमा मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि भने पूर्णरुपमा अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न लागेको हो । यस्तो… Read more »
ललितपुरको शंखुमा दुर्घटना
Posted On February 9, 2018 Author siteadmin Category सामाजिक.
ललितपूर,२५ माघ । कोंज्योसोम गाउँपालिका २,शंखुस्थित लाँकुरीभन्ज्याङ बाचचौर सडक खण्डमा बिहीबार समान ढुवानी गर्ने आइचर दुर्घटना हुँदा सवारीका चालक राजन चौंलागाईको मृत्यु भएको छ । बा १ क ६७४० नम्बरको आइचर गुडिरहेको अवस्थामा अचानक ब्रेक फेल भई दुर्घटना भएको हो । चालकको मृत्यु भए तापनि अन्य सबै यात्रुहरु सकुशल रुपमा बाँच्न सफल भएका छन् ।… Read more »
चापागाउँमा मिनि रंगशाला
ललितपुर, गोदावरी नगरपालिकामा बन्न लागेको मिनि रंगशालाको सर्भे सुरु भएको छ। चापागाँउ टाखेलमा रहेको पुरानो ढुङ्गा खानीमा बन्न लागेको रंगशालाको सर्भे गत सोमबारबाट सुरु भएको हो। ललितपुर क्षेत्र नं १ प्रदेश ख का सांसद चेतनाथ संजेल र गोदावरी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीले सयुक्त रुपमा ड्रोन क्यामरा उडाएर सर्भेको उद्घाटन गरेका थिए। सुरुमा मिनि रंगशालाको… Read more »
हात्ती र कृष्णप्रसादको प्रेम
Posted On February 7, 2018 Author siteadmin Category सामाजिक.
पवनकली सूँडले सानो ढुंगा टिपेर कृष्णलाई हान्छे । कृष्ण बुझ्छन्, पवनकलीलाई भोक लाग्यो । पवनकली विरामी हुन्छे, कृष्णले साथ छाड्दैनन् । पवनकली रिसाउँछे, कृष्ण फकाउँछन् । यस्तो छ सदर चिडियाखानाकी पोथी हात्ती पवनकली र फनित कृष्णप्रसाद आचार्यको सम्बन्ध । झापाका कृष्णप्रसादले आचार्यले २१ वर्षको उमेरमा २०४४ सालमा हात्ती स्याहार्ने जागिर खाए कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा… Read more »
बलियो बन्दै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका !!
झण्डै ३ बर्ष टहरामा दिन गुजारेका काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलापोटका भूकम्प प्रभावितहरूले धमाधम बलियो घर निर्माण सुरू गरेका छन् । बलियो घर कार्यक्रमको प्राविधिक र सामाजिक विकास अधिकृत सम्मिलित मोबाइल टोलीको परामर्शमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणले गति लिएको छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौंमा पुनर्निर्माणको कार्य ढिला सुरू भएको हो USAID Nepal National Society… Read more »
काठमाडौँ — एउटी महिलाको साथ पाउँदैमा जन्मदाता बाबाआमाको सबै गुण चटक्कै बिर्सने कस्तो चलन ? बुहारीको रुपमा भित्रेकी महिलाले किन यो कुरा बुझ्दैनन् ? जब आफुले आफ्नो श्रीमानका बाबाआमा आफुलाई घाँडो भएर पाल्न सक्दिन, साथमा राख्न नसकेर जानाजान आश्रममा पठाउँछिन् । नेपालको पछिल्लो जनगणना (२०६८) अनुसार कुल जनसंख्याको करिव ९ प्रतिशत अर्थात २५ लाखभन्दा बढी… Read more »
भूत बनेर तर्साउनेको पर्दाफास, वास्तविक्ता खोज्न गरिएको स्टिङ अपरेसन सफल !
काठमाडौँ – New24 न्युजको टिम सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ललितपुरको टिकाथलीमा रहेको भुत घर भनिने स्थानमा अहोरात्र खटिरहेको थियो। सोधपुछ र खोजि गर्दै जादा विश्वासै नलाग्ने तथ्यहरु बहिरिएको छ। हामीले झ्याल फुटाउने मानिसले ओप्पो (OPPO) मोबाइल प्रयोग गरेको र महिला देखा परेको भनेपछि घरपेटी अन्जाना उपाध्यायले उक्त मोबाइल तल्लो तलामा बस्ने ललिता चौधरीले बोक्ने बताएकी छिन्। साथै ललिता आफ्नो मिल्ने साथी रहेको … Read more »
‘हुकिङ हटाऊ, महसुल उठाऊ’ अभियान, ३७८ ठूला ग्राहकको लाइन काटियाे
काठमाडौँ — ‘हुकिङ हटाऊ महसुल उठाऊ’ अभियान शुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ललितपुरले गत साउनदेखि यही माघ २० गतेसम्म ३७८ ठूला ग्राहकको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणका ललितपुर प्रमुख जयकृष्ण यादवका अनुसार ती ग्राहकले ९० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ। लतितपुरका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा संगठित रुपमा विद्युत् चोरी भइरहेको पाएपछि चोरी… Read more »